बान्ता भै लगत्तै सास फेर्न गार्हो भयो भनेका ४८ बर्षिय पुरुषको भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा नि*धन, कोरोनाको आसंका ! – Online Nepal
चितवन । भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा एक जना पुरुषको ज्यान गएको छ । रामग्राम ७, नवलपरासीका ४८ वर्षीय पुरुषको सोमबार बिहान निधन भएको हो ।
अस्पताल श्रोतले जानकारी दिए अनुसार ती पुरुष निमोनियाबाट ग्रसित थिए । मृतक पुरुषमा कोरोनाको आशंका गरिएको छ । अस्पताल श्रोतका अनुसार उनको बिहान ३ बजे निधन भएको हो । उक्त पुरुषलाई लुम्बिनी अस्पतालले भरतपुर रेफर गरेको थियो । राती साढे १२ बजे अस्पताल आएका पुरुषलाई आइसोलेसन कक्षमा राखेर उपचार गराइएको थियो ।
२ दिन पहिले खाना खाएपछि बान्ता भएको र लगत्तै सास फेर्न गार्हो भएपछि बिरामी लुम्बिनी अस्पताल पुगेका थिए । उनको लुम्बिनीमा स्वाब परिक्षण हुँदै छ । बिरामीमा कोरोना संक्रमण परीक्षण भने गरिएको छैन । केहीबरेमा स्वाब निकालेर पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ । यता भरतपुर अस्पतालले पनि मृतक पुरूषको स्वाब परिक्षणका लागि पठाउने तयारी गरेको छ ।
त्यस्तै आइतबार राति वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालबाट १८ जना डिस्चार्ज भएका छन् । १८ जना डिस्चार्ज भएसँगै निको हुनेको संख्या १०५ पुगेको हो । गत बैशाख २१ गते अस्पताल भर्ना भएका उनीहरु सबै एकै परिवारका रहेको बताइएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डाक्टर मदन उपाध्यायले भन्नुभयो- ‘आइतबार एकै परिवारका १८ जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किनु भएको छ, उहाँहरुको २ पट नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि डिस्चार्ज गरेका हौ । डिस्चार्ज हुनेमा ११ जना पुरुष र ७ जना महिला रहेका छन् ।
Prevप्रहरीसंगको भी;डन्तमा राजनको नि*धन
Nextधमाधम कोरोनालाई जित्दै नेपाली : १०५ जनाले को*रोना जितेर घर फर्के !
राजेन्द्र खड़कीको गर्जन राजेश हमाललाई सरकारले महानायक घोषणा गर्नुपर्छ (भिडियो हेर्नुहोस)
कोरोना संकटसँगै नेपालका लागि थपियो यस्तो अर्को चुनौती
भर्खरै सरकारले ल्यायो नसोचेको नियम !